A tọhapụrụla Google Chrome 84 na ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
A tọhapụrụla Google Chrome 84 na ndị a bụ akụkọ ya
Google kwuputara mwepụta nke ọhụrụ anụ version nke ihe nchọgharị weebụ gị Ihe nchọgharị Google Chrome 84. Ntughari ohuru a adighi ka ndi ozo gara aga Ọ naghị abịa ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, mana ọ na-ewebata nkwalite nche dị iche iche.
Chrome 84 tumadi na-enye nchebe dị mma pụọ ​​na ujo na ngwakọta agwakọta, rusma ọkwa intrusive, wdg, ma wepu ogbugba ndu TLS ochie. Enwekwara mgbanwe ole na ole ndị ọzọ na atụmatụ ọhụrụ maka ndị mmepe.
1 Ozi ndị isi na mgbanwe nke Google Chrome 84
1.1 Etu esi etinye Google Chrome 84 na Linux?
Ozi ndị isi na mgbanwe nke Google Chrome 84
Otu n'ime mgbanwe ndị bụ isi soro ụdị nchọgharị ọhụrụ a bụ mwepụ nke TLS 1.0 na TLS 1.1 nke ekwuputalarị na nhazi ahazi kemgbe 2018 ebe Microsoft, Google, Apple na Mozilla kwuru na ha ga-ewepu nkwado maka usoro nkwukọrịta TLS 1.0 na 1.1 dịka nke 2020.
Google zubere ime ya na Chrome 81, mana n'ihi oria ojoo a nke Covid-19, protocol iwepụ e-egbu oge nke mere na ndị ọrụ nwere ike ịnweta saịtị ahụike na gọọmentị nke nwere ike iji asambodo ochie. Malite na Chrome 84, Google wepụrụ nkwado maka TLS 1.0 na 1.1.
Ugbu a, mgbe ndị ọrụ gbalịrị ịnweta saịtị web iji asambodo ndị a, otu ibe ga-anabata ha akara: «Njikọ gị enweghị nchekwa zuru oke«. Ndị ọrụ Chrome Enterprise nwere ike rụọ ọrụ TLS 1.0 na 1.1 nkwado ruo Jenụwarị 2021.
Mgbanwe ọzọ ekwuputara na nke ohuru a nke Chrome 84 bụ ịdọ aka ná ntị anya megide nbudata ọdịnaya agwakọtara. Nke a bụ ọrụ maka ịdọ aka ná ntị anya megide nbudata nke ọdịnaya agwakọtara.
Na nsụgharị ndị gara aga nke Google Chrome, Google gosipụtara njehie njikwa mgbe ụdị nbudata ndị a malitere. Chrome 84 ga-egosiputa ịdọ aka na ntị ọhụụ mgbe nbudata ọdịnaya agwakọtara malitere.
Warningdọ aka na ntị a ga-egosi nke ahụ faịlụ "enweghị ike ibudata ya n'enweghị nsogbu".
Akpọchiela amamọkwa intrusive, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-akparị mmadụ ma bụrụ "otu n'ime mkpesa ndị isi sitere n'aka ndị ọrụ." Chrome 84 na-edozi nsogbu a site na igbochi amamọkwa intrusive na arịrịọ ikike saịtị ndị ọzọ na-agba ndị ọrụ ume mgbe niile ka ha rụọ ọrụ.
Inweta n'ike mmụọ nsọ site na UI maka ọkwa dị jụụ na Chrome 80, ndị mmepe ahụ webatara atụmatụ ọhụrụ, nke na-achọ ịkụda ndị ọrụ ịnye saịtị ikike igosipụta mata.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịchọta nkwado maka API ọhụrụ: OPT Web API, mkpọchi mkpọchi ihuenyo API, QuicTransport API, Raw Clipboard access API, wdg.
Chrome 84 na-agbakwunye nkwado maka API web web OTP (otu paswọọdụ), nke ihe nchọgharị na-abanye na koodu 2FA nke SMS zitere na-akpaghị aka.
Ihe nchọgharị ahụ ga-amịpụta panel elu ka ị nwee ike "kwe" ka koodu abanye na akpaghị aka. Ọ dịịrị weebụsaịtị ọ bụla iji kwado ọrụ a. Chrome 84 na-egosiputa mkpọchi mkpọchi API ka saịtị wee nwee ike ịrịọ ka ihuenyo gị mụrụ anya yana ngwaọrụ gị anaghị agbachi.
Ọzọkwa, Google emeela ka mmejuputa mmemme animation API mekwaala site na Chrome. Nke a "nkọwapụta kachasị mma" pụtara na ihe nchọgharị ahụ nwere ike ihicha ma wepu animations ochie iji chekwaa ebe nchekwa ma melite arụmọrụ.
QuicTransport API na-enye ohere ka ngwa weebụ jikọọ na sava site na iji usoro ịgbatị mbupụ bidirectional low QUIC.
Usoro a na-enyere ngwa iji ziga ozi ma nweta data iji ngwugwu UDP. Usoro latency dị ala ya na-enyere ndị mmepe aka ịmepụta ụzọ ụzọ abụọ dị n'etiti ngwa weebụ na sava, yana arụmọrụ dị elu.
Finalmente nke mgbanwe ndị ọzọ na-apụta na ụdị ọhụụ a Chrome 84 bụ ihe edozi maka nsogbu nchekwa 38.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị ihe nchọgharị ọhụrụ a ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye Google Chrome 84 na Linux?
Ọ bụrụ na i nwere mmasị inwe ike ịwụnye ụdị ọhụụ nke ihe nchọgharị weebụ a ma ị kabeghị aka ya, ị nwere ike ibudata installer na-awa na deb na rpm nchịkọta na ya ukara website.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụla Google Chrome 84 na ndị a bụ akụkọ ya
E wepụtala EndeavorOS 2020.07.15, mara mgbanwe ya na akụkọ ya
A tọhapụrụla NetworkManager 1.26 ma ndị a bụ mgbanwe ya